Tonizia: Miverina indray Ny Herisetran’ny Polisy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Mey 2011 5:58 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, Ελληνικά, Français, Italiano, 繁體中文, 简体中文, বাংলা, Español, English
Mitohy ny hetsi-panoherana ao Tonizia, taorian'ireo fanambaràn'ny Minisitry ny Atitany teo aloha Farhat Rajhi nivoaka tao amin'ny pejy Facebook iray antsoina hoe “Skandali” ka tao anatin'izany no nilazany mialoha ny hoe mety hikononkonona fanonganam-panjakana ataon'ny miaramila, dia ireo mpiandany amin'ny filoha niongana, raha toa ka mandresy amin'ny fifidianana ny Antoko Islamista Al-Nahdha amin'ny 24 Jolay. Nilaza ihany koa izy fa Rachid Ammar, Lehiben'ny Etamazaoron'ny Tafika Toniziana, dia nandeha tany Qatar niresaka tamin'ny Filoha teo aloha Ben Ali, ary hitohy hotantaninà governemanta miafina i Tonizia, tarihan'ny naman'i Ben Ali iray, dia i Kamel Ltaief.
Mpanao fihetsiketsehana iray darohan'ny polisy iray miakanjo sivily
Nifamory indroa tato anatin'ny 24 ora farany ireo mpandàla ny demaokrasia, ny Alakamisy tolakandro sy ny Zoma maraina, tao an-dalamben'i Hbib Bourguiba, mba hangataka ny fialan'ny governemanta. Nandritra ireo fotoana roa ireo dia tamin-kerisetra no nanaparitahan'ny polisy mpandrava korontana an'ireo mpanao hetsi-panoherana, tamin'ny fampiasana entona mandatsa-dranomaso sy kibay.
Winston Smith, mpitoraka bilaogy ao amin'ny Nawaat manoratra hoe:
Androany, 5 May, ny polisy mpandrava korontana sy ny Mpitandro filaminam-panjakana dia manohy mamoritra ireo vahoaka amin'ny fanafihana ireo mpanao hetsi-panoherana tao amin'ny Lalamben'i Hbib Bourguiba, tao Tunis renivohitra
Lahatsary Youtube iray, nivoaka tamin'ny 5 May no mampiseho fivorivoriana kely nataon'ireo mpanao hetsika manohitra ny governemanta, talohan'ny fidirana an-tsehatr'ireo mpitandro filaminana.
Ny Zoma, na izany aza, nihenjana ny tady ary nahery setra ny firotsahana an-tsehatra nataon'ny polisy.
Ben Karim mibitsika hoe:
Zava-mitranga amin'izao fotoana eto #Tunis: Mpanao hetsi-panoherana am-pilaminana voadaroka sy voatifitry ny polisy amin'ny entona mandatsa-dranomaso , miverina indray ny fampiasan-kery ataon'ny polisy #Tunisian
Haythem El Mekki miteny hoe:
Rehefa mahasambotra tanora iray ry zareo polisy, dia miara-mirohotra midaroka azy tsy misy indrafo daholo izy mianakavy avy eo.
Mandositra ny herisetra ataon'ny polisy
Nawaat mibitsika hoe:
AvenueBourguiba à Tunis : violence, tabassage arrestations arbitraires
Lalamben'i Bourguiba ao Tunis: herisetra, daroka, ary fisamborana tsy amin'antony
Namely mpitoraka bilaogy sy mpanao gazety ihany koa ny mpitandro filaminana.
Fatma Arabicca, mibitsika hoe:
Nalain'ny polisy an-keriny ny mpitoraka bilaogy, Bassem Bouguerra, niharan'ny daroka tsy nisy indrafo ary navela teny an-dalambe avy eo. Ratra mafy eo amin'ny faritry ny lohany
Leena Ben Mhenni rmaneho hevitra ao amin'ny pejy Facebook-ny:
Malahelo mafy tokoa mahalala hoe nalain'ny polisy an-keriny, nodarohana ary natsipy teny rehetra teny ny namako mpitoraka bilaogy Sam Bouguerra. Fahafaham-baraka ho anareo izany!
Mpaka sary iray avy amin'ny AFP, mpanao gazety iray avy amin'ny ShemsFM ary iray hafa avy amin'ny Aljazeera koa no notafihana, raha norahonana kosa ny solontenan'ny Radio Express FM ary nanaovan'ny polisy teny manivaiva.
Nizou mibitsika hoe:
Voadaroka teo ampanaovana fampitàna mivantana ny mpanao gazetin'ny ShemsFm , tapaka ny fifandraisana ary tsy tratr'antso izy avy eo.
Amira Yahyaoui manampy hoe:
Niharan'ny herisetran'ny polisy ny mpaka sary iray avy amin'ny AFP nanao fandrakofam-baovao tao amin'ny Lalamben'i Bourguiba